BUKA: Kusuke umsindo ilungu lePhalamende lithi awaqondiswe izigwegwe ngokushaywa amakhosikazi | News24
BUKA: Kusuke umsindo ilungu lePhalamende lithi awaqondiswe izigwegwe ngokushaywa amakhosikazi
Kampala – Ilungu lePhalamende e-Uganda kubikwa ukuthi lizifake obishini ngemuva kokuba lithe amadoda kumele ashaye amakhosikazi awo njengendlela yokuwaqondisa izigwegwe.
Ilungu lePhalamende, u-Onesimus Twinamasiko, uvele kwi-NTV Uganda ethi: "Njengendoda, kumele umqondise izigwegwe umkakho. Kumele umthinte kancane, umshaye, umbuyise endleleni".
UTwinamasiko ukusho lokhu kulandela amazwi kaMengameli Yoweri Museveni, othe amadoda ashaya abesifazane angamagwala, kumele abhekane nengalo yomthetho.
Owesifazane ongaphezu koyedwa kwabahlanu abaneminyaka ephakathi kuka-15 no-49 ubudala bayahlukunyezwa emakhaya ngokushaywa noma ngokocansi e-Uganda, ngokombiko kahulumeni oshicilelwe ngo-2017, kubika iNew Zimbabwe.com.
OLUNYE UDABA: Kushone 38 wabantu ibhasi liphoseka eweni
Abantu ezinkundleni zokuxhumana bezwakalise ukudinwa ngamazwi kaTwinamasiko, njengoba abanye bethi kumele axolise kulabo abayizisulu zokuhlukunyezwa emakhaya.
Kodwa ngokusho kombiko we-BBC, uTwinamasiko uwavikelile amazwi akhe, wathi umkakhe useke wamshaya naye ngempama.
Uthe nokho akasho ukuthi kumele owesifazane ashaywe alinyazwe noma abulawe, kodwa kumele athole impama nje kuphela.